ब्रह्मदेवमा भारतको दादागिरीः वृक्षारोपण र तारवार गर्नमा अवरोध ! [भिडियो]
भारतको चेतावनीका बावजुत स्थानीयले गरे वृक्षारोपण र घेरवार ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवमा भारतीय पक्षले वृक्षारोपण र सामुदायिक वनको जमिन घेरबारमा अवरोध सृजना गरेको छ ।
सिद्धनाथ सामुदायिक वनले गरिरहेको वृक्षारोपण र घेरवार गर्ने कार्यमा भारतीय पक्षले अवरोध सृजना गरेको हो ।
दादागिरी शैलिमा आएका भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले ब्रह्मदेव बजार नजिकै वृक्षारोपण र घेरवार गर्ने कार्यमा अवरोध सृजना गरेको सिद्धनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष हर्क बहादुर चन्दले बताए ।
‘आफ्नै भूमिमा तारवार र वृक्षारोपण गरिरहेका थियौँ, भारतीय पक्षले भारतीय भूमि भएको भन्दै त्यो काम गर्न दिएको छैन् ।’ उनले दैनिक सञ्चारसंग भने ।
ब्रह्मदेव बजार नजिकै आफ्नो भूमि पर्ने भन्दै तारबार र वृक्षारोपण नगर्न चेतावनी दिए पनि स्थानीयहरुको सहयोगमा आफुहरुले काम भने जारी राखेको उनी बताउँछन् ।
‘भारतीय पक्षले काम रोक भनेको छ तर हामीलाई स्थानीहरुको साथ मिलेको छ । हामीले काम जारी नै राखेका छौँ ।’ उनले भने । भारतीय पक्षले आफ्नो भूमिमा पर्ने भन्दै वृक्षरोपण र तारवार गर्ने काम रोक्न चेतावनी दिए पनि घेरवार गर्ने काम गरेको स्थानीय नविन कलौनीले बताए ।
‘एसएसबीले काम बन्द गर्न भन्यो तर हामीले आफ्नो भूमिमा नै घेरवार गरिरहेका छौँ । यो काम राक्दैनौँ ।’ उनले भने । ब्रह्मदेव बजार नजिकैको क्षेत्रमा सीमास्तम्भ नहुँदा वर्षौदेखि विवाद रहेको छ ।
भारतीय पक्षले सामुदायिक वनले घेरवार र वृक्षारोपणको काममा अवरोध सृजना गरे पछि स्थानीय प्रशासनले बिहिवार स्थलगत अनुगमन गर्दै त्यहाँ अधिकारीसंग छलफल समेत गरेको छ ।
सीमास्तम्भ नहुँदा ब्रह्मदेव क्षेत्रमा वर्षौदेखि सीमा विवाद रहेको शसस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३५ गणका एसपी बिरसिंह साहुले बताए । ‘पिल्लर नहुँदा त्यहाँ विवाद छ । स्थानीयहरुले आफ्नो भूमि यतासम्म हो भन्छन् । भारतीय पक्षले यता (ब्रह्मदेव बजारतर्फ) आफ्नो भूमि भन्छन् ।’ उनले भने ।
उनका अनुसार वृक्षारोपणमा कुनै बाधा सृजना नभएको तर घेरवार गर्दा भारतीय पक्षको चित्त दुखेको हो ।
‘वृक्षारोपणमा त केही समस्या छैन् तर घेरवार नगर्न भनेका छन् । स्थानीयहरुले घेरवार गरिसकेका छन् । भारतीय पक्षले तारवार उखेल्ननु पर्ने भनिरहेका छन् ।’ एसपी साहुले भने, ‘हामी स्थानीय तथा भारतीय पक्षसंग पनि छलफलमा छौँ । छलफलबाट समस्याको समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्दैछौँ ।’
ब्रह्मदेवमा भारतको दादागिरी
ब्रह्मदेवमा भारतको दादागिरी !
Gepostet von Dainik Sanchar am Donnerstag, 23. Juli 2020